जाडोमा मर्निङवाक गर्ने कि नगर्ने ? - Digital Khabar – डिजिटल खबर
Home / स्वास्थ / जाडोमा मर्निङवाक गर्ने कि नगर्ने ?
जाडोमा मर्निङवाक गर्ने कि नगर्ने ?
स्वास्थ्य रहनका लागि हिँड्नु पर्छ । शरीर स्वास्थ्य राख्ने हो भने बिहान कम्तीमा पनि ३० मिनेट हिँड्नु पर्ने चिकित्सकहरुको भनाई छ । बिहानको समयमा हिँड्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो । गर्मी मौसममा बिहान हिँड्दा स्वास्थ्यमा खासै नकारात्मक नपर्ने भएपनि जाडोको समयमा भने मर्निङवाक जानुअघि अनेकन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
हिँडन छोड्नु भयो भने अर्काे केही दिनदेखि प्रेसर तथा सुगर बढ्न थाल्छ र अनेक जटिलताहरु उत्पन्न हुन्छन् । त्यसैले वाकिङ एक्सरसाइजलाई नियमित गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य रहने एउटा महत्वपूर्ण उपाय एक्सरसाइज हो । त्यसमा पनि वाकिङ । यसको ठाउँमा अरु विकल्प पनि छैन ।n
पैसा तथा सम्बन्धमध्ये कसलाई बढी महत्व दिनुपर्छ ?,…